भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई देख्नेबित्तिकै दर्शन गरि सेयर गर्नाले मिल्नेछ तपाईको जीवनमा सुख र शान्ति ! , – Sidha Post 24
विष्णुशंख :- यस शंख पूर्ण सेतो रंगको रहने गर्छ भने जटिल रूपाकृतिको रहने गर्छ । यस शंख भगवान विष्णुको वाहन गरुड़को आकृतिको रुपमा रहने गर्छ । यस शंखलाई धर्म शास्त्रमा “चन्द्र शंख”को रुपमा पनि वर्णन गरिएको छ । पवित्र, ईश्वरीय, दुर्लभ चमत्कारिक रुपमा जसको पनि बाधा, दुख दुर गराउन मद्दत यस शंखले गर्ने गर्छ ।
दुर्लभ देवी शंख :- यस शंख दुर्गाले हातमा बोक्ने गरेको शंखको रुपमा लिने गरिन्छ। धर्म शास्त्रमा यस शंखको ९ पटक प्रयोग गर्नेले असंख्य धन आर्जन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस शंखलाई दैनिक पुञ्ज गर्नाले तपाईको घरमा लक्ष्मीको वास रहन सक्ला र यस शंखलै तपाईको गलामा बाध्ने शंख मालासंग अभिमंत्रित गर्नु भएमा अतुल धन मिल्न सक्छ ।
मणिपुष्पक शंख :- यस शंख महाभारत कालमा सहदेव बजाउने गरेका थिए। यस शंखले परिवारको सम्पूर्ण मनोकामना पुरा गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ। यस शंखको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई हृदय रोग नलाग्ने विश्वास गरिन्छ भने शरीर स्वस्थ रहन्छ।
नीलकंठ शंख :- यस शंख धार्मिक ग्रन्थका अनुसार भगवान शिवले समुन्द्र मन्थनको क्रममा निक्लेको विष शेव न गर्ने क्रममा नीलकंठ शंख माथि राखेर विष शेवन गरेको थिए। यस शंख घरमा स्थापना गर्दा विषालु जनावरले दुख नदिने विश्वास गरिन्छ। यस शंखमा गाईको दुख राखेर पिउने गर्नाले स्वास्थ्य राम्रो हुने विश्वास गरिने गरिन्छ।
दुl बैमा भएकी नेl पाली चेl लीको हेर्नै नl सकिने मात्र ५९ सेl केन्डको भिl डियो लि’lक भयो “उl मेर पुगेका ले मात्र हेl र्नु होला”
जब जाlह्नवीले गाl डीभित्रै धl l माधम ‘लुl गा खोl ल्न’ थालिन्…. (भिडियो)